Mogadishu Journal » 2019 » October » 18
Mas’uul ka tirsanaa Puntland oo Gaalkacyo lagu toogtay
Mjournal :-Koox hubeysan ayaa toogasho ku dishay mas’uul ka tirsan maamulka Puntland, xili uu ku sugnaa Waqooyiga Magalada Gaalkacyo ee Puntland. Mas’uulkan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Xassan Cabdille Hiraabe oo katirsanaa Wasaaradda Maaliyada ee gobolka Mudug. Kooxihii...
Taliye ku geeriyooday Israsaaseyn ka dhacday Muqdisho
Mjournal :-Ciidamo ka tirsan dowladda ayaa isku rasaaseeyey daljirka Daahsoon,waxaana ka dhashay Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Israsaaseynta ayaa u dhaxeysay Ciidamo ka tirsan Milatariga Soomaaliya iyo Boolis waxaana labadda dhinacba soo gaaray waxyeelo. Maxamed...
Madaxweyne Farmaajo oo xarigga ka jaray Taallooyin taariikhi ah
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarigga ka jaray taallooyinka Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, SYL, Dhagaxtuur, Xaawo Taako iyo Axmed Gurey oo dhammaantood dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyey. Madaxweynaha ayaa...
Mjournal :-Dagaalkaan oo geystay khasaaro kala duwan ayaa Kooxda la Magac baxday Macawiisleey iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab waxaa uu ku dhexmaray deegaan duleedka ka ah degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay...
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo la kulmay kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibbada Maraykanka Tibor Nagy
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku sugan Magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxaa uu kulan gaar ah halkaasi kula qaatay Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka ee Afrika Tibor Nagy. Kulanka ayaa waxaa ay uga hadleen horumarka laga...
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa gaaray maanta mar kale Magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wufuuda ka socota Dowladda Federaalka ee maanta tagay Dhuusamareeb waxay Ahlu sunna la meel dhigi doonaan xal u raadinta khilaafka ka ka...
Shir looga hadlayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya oo lagu qabtay Washington
Mjournal :-Shir loogaga hadlayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Washington ayaa waxaa ka qeybgalay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku jooga dalka Maraykanka. Wasiirka Maaliyadda dalka Cabdiraxmaan...
Faahfaahino ka soo baxaya shan ruux oo lagu dilay dulleedka Muqdisho
Mjournal :-Ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen iska horimaad shalay gelinkii dambe kaa dhacay degaanka Ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Iska horimaadkan ayaa daba socday shaqaaqo kale oo maalmo ka hor ka dhacday degaanka taasoo u dhexeysay ciidamada...